Folio Keyboard: fonosana keyboard vaovao Logitech | Vaovao IPhone
Rehefa nividy ny iPad izay ampiasaiko ankehitriny, dia tsikaritro fa tsy nanana fiarovana firy taminy aho. Nividy iray aho Smart Cover hiarovana ny eo aloha sy ny efijery. Saingy tsy ampy izany satria ny vodin-damosina dia vaky ny vodiny sy ny vongan-tany. Ka nividy iray ho an'ny tenako aho Raharaha miverina izay niaro ny lamosin'ny iPad raha nifanaraka tamin'ny Smart Cover izay efa novidiko.
ny holsters dia teboka matanjaka an'ny iPad: miaraka amin'ny asa sy ny endriny samihafa dia mahatonga ny iPad hanana loko iray na hafa na fitendry na tsia ... Izany rehetra izany dia eo am-pelatanan'ny mpamorona toy ny: Apple tenany, Belkin, Logitech… Androany hiresaka momba ny boaty fitendry Logitech vaovao aho: Folio Keyboard.
Andao aloha hijery ny specs nametraka anay tao amin'ny tranonkalany i Logitech ary avy eo ireo fiasa:
Hita amin'ny Carbon Black
Fiainana bateria hatramin'ny 3 volana (fampiasana adiny 2 isan'andro)
Ny halavan'ny Bluetooth® hatramin'ny 10 metatra tsy misy fanelingelenana
Hahavony 248 mm
Ny sakany 198 mm
Ny halalin'ny 25mm
Lanja 639 g (fandrefesana amin'ny tena santionany)
Kitendry fitendry: membrane miaraka amin'ny mekanisma hety
Manana a famolavolana mitandrina tsara. Azo alaina amin'ny maro loko betsaka ho azy iPad fa ho azy iPad Mini (miaraka amin'ny habe mihena, mazava). Mandritra ny fotoana misy ny a fitendry namboarina amin'ny rantsantanana miaraka amina fiasa manokana, ananany zoro roa: iray ho an'ny fanoratana ary iray ho famakiana, fanoratana amin'ny kitendry iPad, fijerena horonantsary ... Izy io koa dia miaro ny efijery amin'ireo lakilen'ny fitendry mitambatra miaraka amina sosona plastika manamboatra elanelana misy eo anelanelan'ny fitendry sy ny efijery.
Ho an'ny asa Manolotra antsika i Folio Keyboard:
Fanoratana mahazatra: Ny lakilen'ny Folio Keyboard dia habe mety indrindra amin'ny fanoratana amin'ny rantsan-tànantsika tahaka ny ataontsika amin'ny solosaintsika manokana. Izy io koa dia manana lakile manokana hampandroso ny hira, hiverina amin'ny efijery lehibe ...
Andriamby: Toy ny iPad, ny Folio Keyboard dia misy andriamby vitsivitsy manaraka ny rafitr'izy ireo izay mamela ny fihazonana marina amin'ny zoro roa ary koa rehefa manidy ny iPad izy dia mihidy ary rehefa sokafana dia mihodina eo amin'ny efijery, toy ny Smart Cover.
Entana: Ny tranga Logitech vaovao misy keyboard dia maharitra mandritra ny 3 volana (mampiasa azy 2 ora isan'andro) ary, rehefa lany ny bateria (izay mifandray amin'ny iPad amin'ny alàlan'ny Bluetooth) dia mifandray amin'ny solosaina miaraka amin'ny tariby USB tonga ao anaty boaty. Azontsika atao ny manoratra sy mamaly ny bateria fitendry amin'ny fotoana iray, izay manamora ny fiainana ny mpampiasa.
Amin'izao fotoana izao Folio Keyboard dia eo am-pamokarana ary azontsika atao ny mividy azy mialoha amin'ny tranokala Logitech amin'ny vidiny 99.99 euros. Na ny iPad na ny iPad Mini.
Fanazavana fanampiny - Snugg Case Cover, fonosana kalitao ho an'ny iPad Mini anao
Loharano - Logitech
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Folio Keyboard: fonosana keyboard vaovao Logitech
Ny famafana tarehimarika amin'ny calculator iPhone dia mora fa tsy dia be intuitive
Power Utility: bokotra iray hanombohana indray, famerenanana ary hiditra amin'ny fomba azo antoka (Cydia)